Ny alahady teo, ny vinantony ihany no namono ny rafozany tamin'ny fomba feno habibiana. Niala ny tanindrazany ilay tovolahy mba hila ravinahitra. Ilay ramatoa kely nanome toky fa hiandry azy ary tsy hiaraka amina lehilahy hafa mihitsy. Nifanaraka ny an-daniny sy ny an-kilany fa hifampiandry. Naharitra 4 taona ny nandaozany ny tanindrazana. Nanapa-kevitra ilay tovolahy fa hody hiverina hamonjy ny andefimandriny. Vao tonga tao an-tanàna, akory ny hagagany fa nahita ilay fofombadiny efa niteraka roa. Tsy izao no nifanarahana, hoy izy. Nampangainy ho miray tsikombakomba amin’ilay tovovavy ny ray aman-dreniny. Nitsoaka moa ilay tovovavy izay saika hovonoin’ity tovolahy avy hatrany. Vao miha niakatra ny tambaviny, tezitra mafy ka avy hatrany dia ilay rafozam-baviny no nodarohany sy notsatohany lefona ary maty tsy tra-drano. Gaga ny rehetra nahita ny fahasahian'ity tovolahy tamin'ny fihetsika feno habibiana. Avy namono an'ilay rafozany izy dia nitolo-tena teny amin'ny mpitandro ny filaminana ary efa nampidirina am-ponja vonjimaika.